Nhau - Shandong Gaoqiang akapa mari yedzidzo
"Kutenda kuna General Manager Zhu, nekuda kweShandong Gaoqiang, tichadzidza nesimba tapinda kuyunivhesiti nekubhadharira vanhu ..." "," Tinotenda Maneja Zhu, tinotenda kambani nekutibatsira nebasa rekuvhenekesa mumisha yeJuujianpeng .. ., yekutenda kwechokwadi haugone kumira kunzwa.
Mhemberero yekupa zvipo yakaitirwa kuJijianpeng Village Committee muPingyi County muna Nyamavhuvhu 26. VaZhu Mengshou, maneja mukuru weShandong Gaoqiang New Material Technology Co., LTD vakapa zvivheneko zvemwenje nemidziyo kuvadzidzi vashanu varombo uye Jiujianpeng muPingyi County. Vanhu vanopfuura gumi vakapinda mhemberero yemipiro yezvinhu zviviri zveveruzhinji, kusanganisira Zhang Guanlin, mutevedzeri wemunyori wedare reCommunist Party rePingyi County, Jiao Dale, secretary weBato rePingyi County, Ji Dayong, munyori wekutanga weJijijianpeng, uye Meng Ding, mutevedzeri wemunyori weJuujianpeng.
Panzvimbo yemupiro, GM Zhu akapa 4, 000 yuan kune mumwe wevadzidzi vashanu varombo vakanga vava kuda kupinda kuyunivhesiti. Akataurirana nevadzidzi varombo, ainzwisisa zvakadzama kudzidza kwavo uye nehupenyu, Akagovana ruzivo rwake rwekukura nevadzidzi, uye akavadzidzisa kuti vagare vachionga izvo zvavainge vadzidza uye vadzorere guta rekumusha kwavo nenzanga nezviito zvinoshanda.
Panguva imwecheteyo, Mushure mekudzidza mamiriro ezvehupfumi e Jiujianpeng Village kubva mukutaurirana naSecret Ji, maneja Zhu akapa 10,000 yuan yemari yekutsigira zvivakwa zvemwenje mumusha. Mukuru wemusha weJijianpeng, Liu Yuefeng akatenda GM zhu nekufamba kwerudo uku, ndokupa gwaro rekuremekedza Zhu, guta rakatumira munyori wekutanga wemunyori wemwaka akapiwa Zhu general love enterprise pennant.
Pakupera kwemhemberero, General Manager Zhu akati: Kubva pakagadzwa makore anoda kusvika gumi apfuura, kambani yeGao Qiang yanga ichitevedzera pfungwa ye "kuvimbika, kushanda nesimba". Ipo ichizadzisa kusimudzira kwehupfumi hwekambani, inoisa pakukosha kukuru kubhadhara nzanga, inotsigira zvinokonzeresa chikonzero chekutarisira chizvarwa chinotevera, uye inoronga kuita mamwe mabasa eruzhinji pagore mune ramangwana. Panguva imwecheteyo, inodaidzirawo kune vamwe vezvemabhizimusi uye vanhu vane hanya nevanhu kuti vapinde mumabasa eruzhinji
Shandong Gaoqiang haazombokanganwa chinangwa chepakutanga, chengetedza chinangwa mundangariro, ramba uchiita chikamu munharaunda dzekudyidzana neruzhinji, kubatsira vanhu vazhinji vanoda rubatsiro, kupfuudza rudo, ramba uchinyora moyo muhombe, kubatsira kuchikamu chitsva che nzanga!